आइपीएलः विराटको टिमले निकाल्ला आज पहिलो जित? - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएलः विराटको टिमले निकाल्ला आज पहिलो जित?
काठमाडौं, चैत १७ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) आ आज २ वटा खेल हुँदै छन् । पहिलो खेल नेपाली समय अनुसार अपरान्ह ४ः१५ बजे सनराईजर्स हैदरावाद र रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर र राति सवा ८ बजे चेन्नई सुपर किंग्स र राजस्थान रोयल्यसबीच भिडन्त हुँदैछ ।
यी सबै टिमको आज तेस्रो खेल हो । चेन्नई लगातार तेस्रो जितको खोजिमा छ । हैदराबादले भने एकमा जित र एकमा हार व्यहोरेको छ । बेंग्लोर र राजस्थान लगातार दुई खेलमा पराजित भएकाले पहिलो जितको खोजिमा हुने छन् ।
उद्घाटन खेलमा चेन्नईसँग ७० रनमा समेटिएको बेंग्लोरले दोस्रो खेलमा मुम्बईले दिएको १८७ रनको लक्ष्य पूरा गर्न असफल भएको थियो । हैदराबादको घरेलु मैदानमा खेल हुन लागेकाले उसलाई ग्राउण्डले केही फेबर गर्न सक्ने आँकलन गरिन्छ । शुक्रबार हैदराबादले राजस्थान रोयल्सलाई यही मैदानमा ५ विकेटले पराजित गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस सन्दीपलाई नखेलाउनु के दिल्लीको गल्ती?
महेन्द्रसिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नई सुपर किंग्सको नजर भने शीर्ष स्थानमा उक्लने रहेको छ । लगातार दुई खेल जितेको चेन्नाई ४ अंक सहित तेस्रो स्थानमा रहे पनि एक खेल बढी खेलेका कोलकता नाइट राइडर्स र दिल्ली क्यापिटल क्रमश पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् ।
आजको खेलमा चेन्नई विजयी भए २ अंकको अग्रतासहित शीर्ष स्थानमा उक्लने छ । राजस्थान रोयल्य पहिलो जितको खोजिमा छ । पञ्जाबसँग १५ तथा हैदरबाबदसँग ५ विकेटले पराजित भएको राजस्थानलाई चेन्नईविरुद्ध जित निकाल्न संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राजस्थानले हैदराबादविरुद्ध १९८ रन बनाउँदा पनि बलरहरुको प्रदर्शनका कारण ५ विकेटले पराजित हुन पुगेको थियो । पञ्जाबविरुद्ध १८४ रनको लक्ष्य पछ्याउँदा १७० रन मात्रै बनाउन सकेको थियो ।
ट्याग्स: IPL, SRH Vs RCB